Suuqa caanaha geela ee Soomaaliya oo kobcay - Halbeeg News
MUQDISHO (HALBEEG)- Caano Soomaali fresh ah ayaa la helay, inkastoo Soomaalidu inteeda badan ay isticmaalaan caano dibadaha laga soo dhoofiyay maadaama uu hoos u dhacay wax soosaarka caanaha laga soo saaro gudaha dalka oo aanay ku filneyn baahida dadweynaha ee ah in la helo caani saafi ah oo cusub ah.
Dalkan Soomaamiya oo ah dal sabool ah oo anaan laga heli karin qalabkii qaboojiyayaasha ee loo baahnaa in caanaha loo isticmaalo sidoo kale aanan laga helin koronto joogta ah oo mar walba la isku haleyn karo ayaa keenaya caqabada badan oo hor taagan in macaamiisheena aan gaarsiino caano cusub oo saafi ah kadib safar dheer oo kaga soo baxno beerta lo’da illaa suuqa.
Soomaalida ayaa aad u xiiseeya caanaha, sanadkii 2014-kii wax soo saarka caanaha Soomaaliya wax ay ka faaiiday $3.3 Bilyan oo dollar, ($2.7 Bilyan oo kamid ah lacagtaa, Caanaha Geela kaliya ayaa laga macaashay) iibka caanaha ee gudaha dalka iyadoo aanay rikoorkan ku jirin wax caana ah dibadaha loo iib geeyay.
Sanadkii 2017-kii waxaa hoos u dhac ku yimid soo saarka caanaha dalka kadib markii ay dhacday abaar aad u daran galaafatay 6.4 Milyan oo neef OP isugu jira Geel, Lo’ iyo Ariba.
Hay’adda USAID oo maalgelineysa mashruuca magaciisu loo soo gaabiyo GEEL ayaa ku dadaaleysa sidii dib loogu qaabeyn lahaa suuqa caanaha Soomaaliya.
“Sicirka korontada Soomaaliya wax uu ku sadex jibaar maa inta badan sicirka wadamada caalamka. Ka hor intii aanan bilaabin isticmaalka soolarka qoraxda iskuma keeni karin in aan caanaha macaash ah ka sameeyo iyo in aan caano cusub oo saafi ah aan macaamiisheyda u geeyo” ayey tiri Shukri Cali oo agaasime ka ah Shirkadda Irmaan ee caanaha soo saarta.
Hay’adda USAID ayaa 160 shirkadood oo soo saara caanaha iyo shan shirkad oo kale oo ay iminka howshoodu socoto wax ay ka caawisaa sida ay usoo saari lahaayeen Caano iyagoo adeegsanaya teknoolojiyadda casriga ah.
MUSTAF "xus ayaan u qaban doonnaa dadkii uu laayey maamulkii hore"